ECO-Block အမှတ်တံဆိပ် Autoclaved Aerated Concrete Block (AAC Block)
ISO-9001, ISO-14001 လက်မှတ်ရရှိထားသော Myanmar AAC &amp; Panel Co., Ltd. မှ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်လိုက်သော ECO-Block အမှတ်တံဆိပ် Autoclaved Aerated Concrete Block (AAC Block) အမျိုးအစားအား မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြင့် သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ မိမိတို့ အသုံးပြုလိုသည့်အရွယ်အစားများကိုလည်း အထူးအော်ဒါအနေအဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မြေဆီလွှာပျက်စီးမှုနှင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ECO-Block မှ ကာကွယ်လိုက်ပါပြီ။ ဝန်းကျင်ကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ECO-Block ကိုသုံးစွဲကြပါစို့ လားခင်ဗျာ။ •	အပူခံနိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိခြင်း •	ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေခြင်း •	ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်ရှိခြင်း •	အသံလှိုင်းကာကွယ်နိုင်ခြင်း •	တိကျသော အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍန်ရှိခြင်း •	ရာသီဥတုအပူ/အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း •	မြေနီအုတ်အစားထိုး •	ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု ကာကွယ်နိုင်ခြင်း •	လျင်မြန်စွာ တည်ဆောက်နိုင်မှုရှိခြင်း **သင့်အဆောက်အအုံများကို မြေနီအုတ်အစားထိုး ECO-BLOCK ဖြင့်တည်ဆောက်ပါ**
Aluminum ceiling panel,many different pattern
ဆန်းသစ်လှပသော သွေးကြောဒီဇိုင်း Belleza Porcelana Tiles
Granite ကျောက်ပြားများသည် မြတ်နိုးဖွယ်ရာ အဆောက်အအုံအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ အဆောက်အအုံးအတွင်းအပြင် ဒီဇိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထိုကျောက်ပြားသည် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအကြီးစားများ ၊ ဟိုတယ် ၊ နေအိမ်အဆောက်အဦး ၊ လေဆိပ်များတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ Granite ကျောက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဟန့်အတား ကျောက်တုံးတို့မှာ ကွန်ကရစ်နှင့် လုပ်ထားသော ကျောက်တုံးများထက် သာလွန်ပါသည်။Granite ကျောက်ပြားများကို ဆောက်လုပ်ရေးတွင်သုံးပါက မျက်နှာပြင်များအားလုံးကို အကြမ်း(သို့) အချောပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုကျောက်ပြားများသည် ရောင်စုံ၊မျိုးစုံရှိပြီး စိတ္တဗေဒအရ Granite ကျောက်ပြားများကို ကြည့်ရှုသူတို့အား ဘ၀င်ရွှင်မြူး စေပါသည်။ ထို Granite ကျောက်ပြားများကို သင်္ချိုင်းဂူတို့၌ ဆောက်လုပ်ရာတွင် မြန်မာပြည် နှင့် အချို့နိုင်ငံများ၌အသုံးပြုကြပါသည်။
စစ်တန်းများ ကောက်ယူချက်အရ သုံးစွဲသူများ၏ ၃၀~၄၀%မှ ကြမ်းခင်းများအသံမြည်ခြင်းကို Complaint တက်ကြပါသည်။ အသံမြည်ခြင်းအား F-Shaped rabbet and locking Slotနည်းပညာမှကာကွယ်ပေးပါသည်။ရေစိုခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အပူအအေးကြောင့် ကြမ်းခင်းများ ကျုံ့ခြင်း၊ကျယ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။ F-Shaped rabbet locking Slot နည်းပညာမှ အသံမြည်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပြီးကြမ်းခင်းများအချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မူ မရှိအောင် ပြုလုပ်ထားသည့် အတွက်တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်သော လူမူဘ၀ကိုရရှိစေပါသည်။Unique F-shaped lock technique နည်းပညာကြောင့် ကြမ်းခင်းများ၏ သက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံစေပါသည်။ရာသီဥတုခြောက်သွေသည်နေရာများတွင် သုံ့းစွဲသည့်အခါ ကြမ်းခင်းများကျိုးပဲ့ခြင်း၊အက်ကွဲခြင်းများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ထိုသို့မဖြစ်အောင်Lock Bamboo Flooring Features နည်းပညာမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။သံရိုက်ခြင်း၊ကော်ကပ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်မလိုပါ။ ကြမ်းခင်းအားတပ်ဆင်ရာတွင် လျှင်မြန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။၀ါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြမ်းခင်းမျာအားအလွယ်တကူတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးအလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်ပြီးအသုံးပြုရသည်မှာ ဈေးနူန်းသင့်တင့်မျှတပါသည်။
ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့်ကြမ်းခင်း (teak floor)
asm ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊ရုံး၊အခြားအဆောက်အဦးများအတွက် ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ် ထားသော ကြမ်းခင်း (teak floor) များကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။၄င်းကြမ်းခင်း များသည် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ကျွန်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ခိုင်ခံ့သပ်ရပ် ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ကြမ်းခင်းများကို ဒီဇိုင်းဆန်ပီး ခိုင်ခံ့ သပ်ရပ်လှပသော ကြမ်းခင်း (teak floor)ကို အသုံးပြုကာ အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် ခိုင်ခံ့သပ်ရပ်လှပပီး ကျွန်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ကြမ်းခင်း (teak floor) ကို လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက asm ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
PVC Partition Wall Panel, နံရံကပ်အလှဆင်ပစ္စည်းများ
PVC Wall Panel, fast partition wall sysytem,different colour
ရိုးရှင်းလှပသော နံရံကပ် Wallpapper (BB7203)
ဆန်းသစ်လှပသာ ဒီဇိုင်းပုံစံ ဖြင့် သင့်အိမ်ကို အလှဆင်လိုပါသလား။နိုင်ငံတကာ နည်းပညာများဖြင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော နံရံကပ် Wallpaper များကို ကျွန်တော်တို့ Lamex Wallcovering မှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။မလေးရှား နိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့် ကုန်ကြမ်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ကာ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားသောကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။သင့်အိမ်တစ်ခုလုံးကို ဆေးသုတ်စရာမလိုပဲ၊ဆေးနံ ထွက်၍ စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စရာ မလိုပဲ လှပအောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ ရနေပါပြီ။ဒီဇိုင်းလှပပြီး ကြာရှည်ခံ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ပေးနိုင်မှာ အသေချာပင် ဖြစ်သည်။
ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် Laminate Floor
မြင်သာ ၁ လမ်း၊တောင်ဥက္ကာလာပမြို့နယ်ရှိ အိမ်ကို LN-171 ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ဒီ ဒီဇိုင်းကုဒ်က ၁၀ပေပတ်လည် ၁ကျင်းကို ၂ သိန်း၁သောင်းကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Floor King ကြမ်းခင်းပြားက အထူ (၁၂ မီလီမီတာ)၊ အပါး (၈ မီလီမီတာ) ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအမျိူးမျိူးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Floor King ဈေးနှုန်းက ပစ္စည်းလက်ခ အပြီးအစီး ဈေးနှုန်းပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ Floor King Shoroom များသို့ ကြမ်းခင်းပြား ဒီဇိုင်းများ လာရောက်လေ့လာပြီး Floor King စားပွဲတင် ပြက္ခဒိန်များကို နှစ်ဦးလက်ဆောင်အဖြစ် ရယူနိုင်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ Floor King မှ Customer များ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကြမ်းခင်းကို အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊ အသုံးမပြုသည် ဖြစ်စေ Customer များ အိမ်ကို Survey အခမဲ့ ကြည့်ရှုပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။ဘယ်လောက်ကုန်ကျမယ်ဆိုတာ အတိအကျ သိချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိမိအိမ်က ကိုရီးယား laminate ခင်းလို့ သင့်တော်၊မသင့်တော် စတဲ့ လိုအပ်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ရင် Customer များရဲ့ အိမ်ကိုလာရောက်ပြီး အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ် ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ Floor King ရဲ့ တကျင်းဈေးနှုန်းတွင် ဘေးဘောင် စကာတင် ဘီတင် အားလုံးကို လိုအပ်သလို သုံးစွဲပေးမှာ ဖြစ်ပြီး တကျင်းအတွက် အချပ်ရေ အတိကျပေး မှာ ဖြစ်ပါသည်။ တကျင်းအထက်ပိုသွားတဲ့ အချပ်အရေအတွက် ကို နှုတ်ပေးပြီး လိုသွားရင်လည်း အချပ်အရေအတွက် တန်ဖိုးကိုပဲ ပေးရတာ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ customer များ ခေါင်းရှုပ်ခြင်း မရှိပဲ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာမှာပါ။Floor King ဝန်ဆောင်မှုပေးရာမှာ စကာတင် ဘိတင်တွေက PVC လို့ခေါ်တဲ့ ကော်ပြားကို အသုံးမပြုပဲ သစ်သားကို အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် လှပသော ကြိတ်သား စကာတင် ဘိတင်သာ အသုံးပြုခြင်း၊ ရေစိုခံ မြင့်မားတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံပါတဲ့ ၃ မီလီမီတာ အထူရှိတဲ့ ဖော့ကိုသာ အသုံးပြုခြင်း စတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းကိုသာ အသုံးပြုပါတယ်။&quot;သင့်အိမ်မက်များ လှပစေဖို့ Floor King ကြမ်းခင်းပြားဖြင့် အလှဆင်စို့&quot;။
သန့် ရှင်း လှပ သေသပ်သည့် အိမ်ခြံဝင်း အလှဆင် ပစ္စည်း မြက်ခင်း အတု ( Synthetic Grass )
Silver Lotus ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော ဓာတု ပစ္စည်း များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် မြက်ခင်းအတုများ ( Synthetic Grass ) ကို ဖြန့် ဖြူးရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။၄င်းမြက်ခင်းအတု များသည် ဘောလုံးကွင်းများ ၊ ကစားကွင်းများ ၊ ဂေါက်ကွင်းများ နှင့် အခြားအိမ်ခြံဝင်း အလှဆင်သည့် နေရာများတွင် ၄င်း မြက်ခင်းအတု များ ( Synthetic Grass )ကို အသုံးပြု၍ အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် ခြံဝင်းထဲတွင်လည်း ၄င်းမြက်ခင်းအတု များကို တပ်ဆင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် အလှဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း မြက်ခင်းအတုများ ( Synthetic Grass ) ကို ဝယ်ယူအသုံးပြု အလှဆင်လိုပါက Silver Lotus ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
စိတ်ကြည်နူးဖွယ် Vein Stone Granite
A range of beautiful shades that has the effect of opening limited spaces and alternatively, narrowing vast areas and creating interesting contrasts to make the environmentastunning picture of luxurious living or functional working pad. Let Vein Stone enhance the splendour of your living and interior architecture withabeauty so surreal, it awe-inspired. After all, it isaGift or Art from the very Earth we live.
အိမ်တွင်း အလှဆင် Wallcovering များ
ခိုင်ခံ လှပသော နံရံကပ် wallpaper များဖြင့် မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ခေတ်မှီသော နည်းပညာများဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ ထုတ်လုပ်ထားသော အိမ်အလှဆင် နံရံကပ် Wallpaper များကို ဒီဇိုင်းစုံစုံလင်လင် နှင့် အရောင်အသွေး စုံစုံလင်လင်ဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။ယှက်ဖြာသော ပုံစံဖြင့် အရောင်ရင့် နှင့် အရောင်နု ၂မျိူးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိပြီး တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူသောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေမည့် Wallcovering တစ်ခုဖြစ်သည်။ကြာရှည်အသုံးခံပြီး တစ်ကြိမ်အသုံးပြုရုံဖြင့် ထပ်မံ ပြုပြင်စရာ မလိုပဲ ခိုင်ခံလှပသည်။
New Look ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ ၏ မီးဖိုချောင်များကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် အလှဆင်နိုင်သည့်အပြင် လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကိုလူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျဝယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ မီးဖိုချောင်များကိုအလှဆင်လိုပါက New Look ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင် ပါသည်။
အပူကိုစုပ်ယူပီး ရေစိမ့်ဝင်နိုင်သော အုတ်ခဲ ( Permeable Brick )
GREAT WALL BUILDING MATERIALS ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အရောင် အ သွေးစုံလှသောအုတ်ခဲ အမျိုးမျိူးကိုထုတ်လုပ် ဖြန့် ဖြူး ရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။မြို့ ပြလူနေ မူစနစ်မြင့်မားရန်နှင့် ဟန်ချက်ညီမူရှိစေရန် ကားလမ်းများနှင့် လူသွားလမ်းများတွင်ရောင်ပြန် ဟပ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ လမ်းမများပေါ်တွင် ရေကြီးရေလျှံခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပီး အ စိုဓာတ်ကိုခုခံနိုင်သည်။ အပူကိုစုပ်ယူကာ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ပီး ဆူညံသံများကိုလဲစုပ်ယူ ကာမိုးရေများကိုမြေသို့ လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်သွားနိုင်သည့်အာနိသင်ရှိသည်။လူသွားလမ်းများ၊ ပန်းခြံများနှင့်အိမ်ခြံဝန်းကျယ်များတွင် အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသည်။ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အဆောက်အဦးများကိုစိတ်တိုင်းကျဆောက်လုပ်နိုင်ရန် GREAT WALL BUILDING MATERIALS CO.,LTD ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ပြောင်လက်တောက်ပသော Mediterranean Granite Tiles
Mediterranean reinterprets the chalk white villages perched onahillside overlooking the clear deep blue Mediterranean sea and golden beaches. Take in the casual, healthful, warm and intimate existence of the Mediterranean to the space of your choice with three casual chic colours of Natural Calico, Cloudy Pearl, and Pebble Stone. Made in the basic 60x60cm and 60x120cm sizes on textured surface, this collection will evoke the picturesque Mediterranean lifestyle in your home that is comfortable and stylish